Ngaba Sifanele Simoyike USathana UMtyholi?
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISilozi ISpanish Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAymara IsiBhulu IsiBulgarian IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiChitumbuka IsiCibemba IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFinnish IsiFrentshi IsiGa IsiGarifuna IsiGeorgia IsiGreenland IsiGrike IsiGuarani IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHmong (White) IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKazakh IsiKikaonde IsiKikuyu IsiKiluba IsiKimbundu IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKisi IsiKisonge IsiKongo IsiKorea IsiKrio IsiLingala IsiLithuania IsiLuganda IsiLuo IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMam IsiMaya IsiMazatec (sesiHuautla) IsiMoore IsiMyanmar IsiNahuatl (saseCentral) IsiNepali IsiNgabere IsiNgesi IsiNorway IsiNyaneka IsiNzema IsiOssetia IsiOtetela IsiPapiamento (saseAruba) IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPersi IsiPhuthukezi IsiPolish IsiQuechua (saseAyacucho) IsiQuechua (saseBolivia) IsiRashiya IsiRomania IsiSango IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwahili (saseCongo) IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiTatar IsiThai IsiTigrinya IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTshiluba IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiUkrainian IsiUmbundu IsiUruund IsiVietnam IsiWaray-Waray IsiWayuunaiki IsiXhosa IsiZande IsiZulu isi-Igbo
Ngaba Sifanele Simoyike USathana?
Icarbon monoxide yigesi enobungozi—unjalo noSathana
Icarbon monoxide yigesi enobungozi. Kunzima ukuzazi xa ukwindawo enayo, kuba ayinambala ibe ayinavumba, nto leyo eyenza irhaxe abantu bengaqondanga. Kusenokwenzeka ukuba abantu abangaphezu kwesiqingatha abafa ngenxa yokurhaxwa emhlabeni wonke, babulawa yile gesi. Kodwa ke, akukho sizathu sakuxhalaba. Zikho iindlela zokuzikhusela kuyo. Abantu abaninzi badla ngokufaka izinto ezibalumkisayo xa besengozini yokurhaxwa yile gesi.
USathana ufana nqwa nale gesi, kuba naye akabonakali, ibe uyingozi kakhulu. Kodwa uThixo akasishiyang’ enyanyeni. Awunasizathu sakumoyika uSathana xa usebenzisa ezi ndlela zilandelayo asinika zona uThixo.
Inkululeko yokuzikhethela. UYakobi 4:7 uthi: “Mchaseni uMtyholi, wonibaleka.” Nangona uSathana enamandla, akakwazi kukunyanzela ukuba wenze into ongafuniyo ukuyenza. Unenkululeko yokuzikhethela. Eyoku-1 kaPetros 5:9 ithi: ‘Yimani ngokunxamnye noMtyholi, niqinile elukholweni.’ Khumbula ukuba, uSathana wemka emva kokuba uYesu embhebhethe kwakathathu. (Mateyu 4:11) Nawe unako ukumbhebhetha uSathana.
Yiba ngumhlobo kaThixo. UYakobi 4:8 usikhuthaza ukuba ‘sisondele kuThixo.’ UYehova uyakumema ukuba ube ngumhlobo wakhe. Ungakwenza njani oko? Eyona ndlela ingcono yokwenjenjalo kukufunda ngaye eBhayibhileni. (Yohane 17:3) Xa ufunda ngoYehova uya kumthanda, uze wenze ukuthanda kwakhe. (1 Yohane 5:3) Uya kusabela njani uBawo wakho wasezulwini xa usondela kuye? UYakobi uthi, ‘naye uya kusondela kuwe.’
Iindlela uYehova asikhusela ngazo
UThixo uthembisa ukukukhusela. IMizekeliso 18:10 ithi: “Yinqaba eyomeleleyo igama likaYehova. Ilungisa libalekela kulo lize likhuseleke.” Kodwa oko akuthethi kuthi igama likaThixo likhubalo. Endaweni yoko, kuthetha ukuba abo balihlonelayo banokuthembela kuye ukuze bakhuseleke ngamaxesha onke.
Umzekelo onokufunda kuwo. KwiZenzo 19:19 sifunda into ebalulekileyo eyenziwa ngamaKristu ase-Efese awayesandul’ ukuguquka: “Abaliqela noko kwabo babeqhelisela ubugcisa bomlingo bazizisa ndawonye iincwadi zabo baza bazitshisa phambi kwakhe wonk’ ubani. Yaye bawabala ndawonye amaxabiso azo, bazifumana zixabisa amaqhosha esilivere angamashumi amahlanu amawaka.” * Loo maKristu atshisa yonk’ into enento yokwenza nokusebenzelana nemimoya, engakhathali ukuba yayixabisa malini na. Singafunda lukhulu kulo mzekelo. Namhlanje kuxhaphakile ukusetyenziswa kwemilingo. Nezinto ezincinci ezinokuthanani nemilingo zinokubiza iidemon. Kubalulekile ukuba sihambele kude nezinto ezinjalo.—Duteronomi 18:10-12.
URogelio ekuthethwe ngaye kwinqaku lokuqala, wade waneminyaka eyi-50 engakholelwa ukuba uMtyholi ukho. Kodwa yaye yatshintsha indlela acinga ngayo. Ngoba? Uthi: “Ndafumana iBhayibhile okokuqala ngqa ebomini bam. Ukufunda iZibhalo kwandenza ndaqonda ukuba uMtyholi ukho. Olu lwazi luyandinceda ukuze ndingabi sisisulu sakhe.”
“Ukufunda iZibhalo kwandenza ndaqonda ukuba uMtyholi ukho. Olu lwazi luyandinceda ukuze ndingabi sisisulu sakhe”
Ungathanda na ukuphila kwixesha apho uSathana eya kube engasekho? Kungenzeka oko. IZibhalo zisichazela ngexesha elizayo laxa uMtyholi, olahlekisa abaninzi, eya ‘kuphoswa edikeni lomlilo nesalfure.’ (ISityhilelo 20:10) Noko ke, umlilo nesalfure yokoqobo azinakukwazi ukwenzakalisa isidalwa esingabonakaliyo somoya. Ngoko ke, idike lomlilo limele ukuba lifanekisela intshabalalo kanaphakade. USathana uza kutshatyalaliswa ngonaphakade. Elo iya kuba lixesha elivuyisa ngokwenene kwabo bamthandayo uThixo!
Okwangoku, qhubeka ufunda kangangoko unako ngoYehova nangokuthanda kwakhe. * Khawufan’ ucinge indlela ekuya kuba mnandi ngayo xa sisithi, “USathana akasekho!”
^ isiqe. 8 Ukuba la maqhosha esilivere ayengawedenariyo yaseRoma, lowo yaba ngumrholo wosuku olunye wabantu abayi-50 000—yimali eninzi gqitha leyo!
^ isiqe. 11 Ukuze ufumane ulwazi olungakumbi ngoSathana nangokusebenzisa imilingo, funda isahluko 10 sencwadi ethi Yintoni Ngokwenene Efundiswa YiBhayibhile? Yicele komnye wamaNgqina kaYehova.